महोत्तरी : सात किशाेरी हराएको घटना अनुसन्धानमा आलटाल गर्दै प्रहरी – The Public Today
महोत्तरी : सात किशाेरी हराएको घटना अनुसन्धानमा आलटाल गर्दै प्रहरी
विजय कुमार सिंह साउन ७, २०७८ ९:१८ am
जनकपुरधाम, साउन ७ गते । महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका-८, स्थित धर्मपुरका सात जना किशाेरी हराएको घटना अनुसन्धानमा प्रहरीले आलटाल गरेको छ । घटनामा संलग्नता आशंका गरिएका कालाकार पूजा पासवान र दलित जनजाति पार्टी भीम आर्मीका प्रदेश इन्चार्ज जितेन्द्र पासवानले थप संशयपूर्ण अभिव्यक्ति दिए पनि महोत्तरी प्रहरी मुकदर्शक बनेकाे हाे ।
घटना गएको १७ चैतमा भएकाे थियाे । शंका गरिएका पूजा र जितेन्द्रबीच पछिल्लो समय विभिन्न कारणले विवाद हुँदा उनीहरू पाेख खाेलाखाेल गरिरहेका छन् । घाँस काट्ने बहानामा घरबाट निस्केका स्थानीय १२ वर्षीया सीमा पासवान, रञ्जना पासवान, १३ वर्षीया ज्योति पासवान, १४ वर्षीया रिया, ११ वर्षीया अर्चना पासवान, १७ वर्षीया नगिना पासवान र २० वर्षीया अस्मिता पासवानलाई हराएको भोलिपल्ट भारतकाे बिहारस्थित सीतामढी रेल्वे स्टेसनबाट उद्धार गरिएको थियो ।
नेपालका प्रहरी अधिकारीले ती किशाेरीहरू टिकटक हेरेर गायिका बन्ने धुनमा मुम्बईतिर लागेकाे दाबी गरेका थिए । तर, किशाेरीको उमेर, परिवेश तथा रहनसहनले प्रहरीले त्यतिखेर गरेको नाटकीय दाबीलाई धेरैले पत्याएका थिएनन् । अहिले आएर घटनामा संलग्नता आशंका गरिएका दुवै जना व्यक्तिकाे पाेल खाेलाखाेलले प्रहरीकाे उक्त दाबी कपाेकल्पित थियाे भन्ने प्रमाणित गरेकाे छ ।
पूजाका अनुसार जितेन्द्रसँग खपटपट हुँदा विवाद हुनुभन्दा एक दिनपहिले फोनमा उनले ‘सोच्न नसक्ने घटना गराइदिने’ धम्की दिएका थिए । अनि भोलिपल्टै पूजाकी आफ्नै काकाकी छोरीसहित सात जना किशाेरी हराएका थिए । जितेन्द्रले घटनाको कडीसँगै जोडिएका केही महत्त्वपूर्ण कुरा खोलेका छन् । उनका अनुसार किशाेरी हराएकै दिन उनी दिल्ली जाँदै थिए । कुनै कामले दिल्ली जाँदाजाँदै घटनाबारे थाहा पाएलगतै आफू बाटोबाटै फर्केको उनले बताए ।
यसबारे प्रहरीले फेरि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एकै ठाउँका सातजना छोरी बेत्तपा भएपछि सबैलाई त्यतिखेर चिन्ता भयो । घटनाले देशभर उथलपुथल मच्चियो । तर, बचा भेटिइसकेपछि यसको पछाडि कसले के भूमिका खेल्याे ? कसको संलग्नता छ ? त्यो खोजबिन हुन सकेन्’, रायले भनिन्, ‘प्रहरीले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्थ्याे । संलग्नलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुपर्थ्याे । उनीहरूको बयानले फेरि घटना शंकास्पद देखिन्छ । आरोपीलाई पक्राउ गरी अहिले फेरि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’
महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश विष्टले घटना अनुसन्धानबारे एसपी आचार्यसित कुरा गर्ने बताए पनि उनले बेवास्ता गरेका छन् । घटना भएका बेला अफू काठमाडौंमा रहेको बताउने उनले अनुसन्धानतर्फ केन्द्रित हुनुको साटो बहानाबाजी गर्दै आएका छन् । ‘घटनाको लामो समय भयो । बीचमा मान्छेले जसलाई जे जे भनेर पनि सिकाए हुन्छ । आफैँ पनि सिकेको हुन्छ’, उनले भने ‘उनीहरूको कुरा अहिले त्यति विश्वसनीय हुन्छजस्तो लाग्दैन । एसपी सा’बसँग सल्लाह गर्नुपर्ला ।’ व्यक्तिगत रिसिइबि साँध्न उनीहरूले एक अर्कामाथि त्यस्तो गम्भीर आरोप लगाएको हुनसक्ने अनुमान डीएसपीले सुनाए । -शिलापत्र